Barmac VSI Orange RC andian-dahatsoratra rotor
RC840 ROTOR, ny rotors series vaovao an'ny Orange dia afaka manatsara ny fotoana famokarana amin'ny alàlan'ny fanitarana ny fiainana ampahany sy ny fikojakojana haingana kokoa.
GUBT dia manome linerà kônô manganese-vy, izay mety amin'ny crusher cone sy crusher gyrator.
GUBT dia manam-pahaizana manokana momba ny varotra cone crusher, ary ny fandrakofana ny ampahany amin'ny crusher cone dia tsy manam-paharoa.
Ny GUBT dia manome rojo valanoranom-boaloboka vita amin'ny vy manganese, izay mety amin'ny mpamaky valanoranony isan-karazany. Manomeza ampahany sy fanohanana ara-teknika ho an'ny indostrian'ny fitrandrahana, fanangonana ary fanodinana!
GUBT dia manam-pahaizana manokana momba ny varotra valanorano ho an'ny varotra volo, ary ny fandrakofana ny ampahany amin'ny valanoranony dia tsy manam-paharoa.
GUBT dia mpitarika manerantany amin'ny sehatry ny varotra VSI. Manana injeniera matihanina amin'ny sehatry ny VSI izahay ary nanokana fotoana sy hery be dia be hampivelarana ny teknolojia ao amin'ny VSI ka hitombo haingana ny fandrakofan'ny vokatra GUBT an'ny VSI PARTS. Raha ampitahaina amin'ny vokatra VSI ankapobeny eny an-tsena, ny vokatra VSI an'ny GUBT dia manana tombony miavaka sasany, ao anatin'izany ny faritra malama, ny habeny marina, ny fanoherana avo lenta ary ny fiainana maharitra anaovana.
Miantehitra amin'ny traikefa amin'ny famokarana tena mahomby, fahaizana ary fitoniana kalitao eo amin'ny sehatry ny VSI, ny GUBT dia mikendry ny hanampy ny mpanjifa hampihena ny vidiny, hampitombo ny fahafahan'ny ampahany, hampihena ny fotoana fihenam-bidy ary hanome tolotra tsara aorinan'ny varotra.
GUBT dia manome ny Liner HIS vita amin'ny vy manganese, chromium avo, ary vy Hardox, mety amin'ny crusher misy fiantraikany isan-karazany manerantany. GUBT dia manome ampahany sy fanohanana ara-teknika ho an'ny indostrian'ny fitrandrahana, fanangonana ary fanodinana!
Miantehitra amin'ny traikefa amin'ny famokarana tena mahomby, fahaizana manokana ary fitoniana kalitao eo amin'ny sehatry ny HSI, GUBT dia mikendry ny hanampy ny mpanjifa hampihena ny vidiny, hampitombo ny fahafahan'ny ampahany, hampihena ny fotoana fihenam-bidy ary hanome tolotra tsara aorinan'ny varotra.
GUBT dia mpitarika manerantany amin'ny indostrian'ny casting. Manana vondron'orinasa injeniera matihanina izahay ary nanokana fotoana sy hery be dia be hanitarana ireo fitaovan'ny casting.
Miantehitra amin'ny traikefa an-taonany maro momba ny milina napetraka sy ny traikefa mahomby amin'ny famokarana, ny fahaizana ary ny fitoniana kalitao eo amin'ny sehatry ny indostria, ny GUBT dia mikendry ny hanampy ny mpanjifa hampihena ny vidiny, hampitombo ny fahafahan'ny ampahany, hampihena ny fotoana fohy ary hanomezana serivisy tsara kokoa aorian'ny fivarotana.